သတင်း - stainless steel welded pipe ၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့ခွဲခြားရမည်နည်း။
သံမဏိဈေးကွက်လုပ်ငန်းကနေထွက်သည်နှင့်အမျှ, အများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလှည့်stainless steel welded ပိုက်ကုန်သွယ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စျေးကွက်၏သိမ်းပိုက်မှုကိုလျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်သော်လည်း stainless steel welded ပိုက်ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမညီမညာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် stainless steel welded ပိုက်အရည်အသွေးကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်အဘယ်နည်း။
Stainless steel welded pipe သည် သံထက် များစွာသော ဂုဏ်သတ္တိများ သာလွန်ကြောင်း ကောင်းစွာ သိရှိကြပြီး၊ အဓိက အချက်မှာ သံချေးတက်ရန် မလွယ်ကူခြင်း၊ သံပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း ဖြစ်သည်။တစ်စုံတစ်ဦးသည် သံမဏိဂဟေဆော်ခြင်းကို သိရှိနိုင်စေရန် ရှေ့တန်းတင်သော သံလိုက်များကို အသုံးပြုသည်။တကယ်တော့၊ ဤနည်းလမ်းသည် သိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်ပါ၊ သံမဏိ welded ပိုက်အမျိုးမျိုး၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံအရ ပုံမှန်အပူချိန်ကို austenite နှင့် martensite သို့မဟုတ် ferritic ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။အလှဆင်ပြွန်ပြားအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသော 304 stainless steel welded tube plate quality ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သံလိုက်မဟုတ်သော်လည်း ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအတက်အကျ သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရည်ကျိုမှုအခြေအနေကြောင့် သံလိုက်ဓာတ်သည် အတု သို့မဟုတ် အရည်အချင်းမရှိဟု မယူဆနိုင်ပါ။304 stainless steel welded ပိုက်ကို အေးအောင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ martensite အသွင်ပြောင်းမှုသည် သံလိုက်ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။
ဂဟေဆော်ထားသောပိုက်များကို မရွေးချယ်မီ၊ 304 ကို နမူနာအဖြစ် ယူ၍ ပစ္စည်းသည် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။
1. ဈေးနှုန်း- 304 stainless steel welded tube plate သည် 301 ၏ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက် နိမ့်ပါက၊ ၎င်းသည် အတုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
2. "304" ကို ပြွန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ထုတ်လုပ်သူ၏ အရည်အသွေး လက်မှတ်ကို သက်သေအဖြစ် ရယူပါ။
3. Acid reagent ကို စမ်းသပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပစ္စည်း 304 သည် အရောင်မပြောင်းဘဲ စက္ကန့် 30 အကြာ၊ 201 အနက်ရောင်၊
Star good steel co., Ltd.သည် သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အမှတ်တံဆိပ် stainless steel ဂဟေပိုက်ကြီးများကို ရွေးချယ်ရန် သတိပေးသည်။Xinghao သံမဏိထုတ်ကုန်များ၏မူရင်းပစ္စည်းများကိုဖောက်သည်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အဓိကအားဖြင့် taigan၊ Baogang နှင့်အခြားအာမခံပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ရိုးသားသော လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပါ။